Ifektri Yesistimu Ejikelezayo Ehlukile - Abakhiqizi nabahlinzeki baseChina Abahlukanisiwe
20Khz ultrasonic nano materials ukuhlakazwa homogenizer
Ukusetshenziswa kwemishini yokucubungula uketshezi lwe-ultrasonic kufaka phakathi ukuxuba, ukusabalalisa, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana, isizinda nokuphendula kwamakhemikhali. Siphakela izingxenye ezahlukahlukene zemboni, ezinjenge-nano-materials, opende nezingulube, ukudla neziphuzo, izimonyo, amakhemikhali namafutha.
Idivayisi ye-Ultrasonic sonochemistry yokucubungula uketshezi
I-Ultrasonic sonochemistry ukusetshenziswa kwe-ultrasound ekuphendukeni kwamakhemikhali nezinqubo. Indlela ebangela imiphumela ye-sonochemical kuketshezi yinto ye-acoustic cavitation. I-acoustic cavitation ingasetshenziselwa izinhlelo ezahlukahlukene ezinjengokusabalalisa, ukukhipha, i-emulsification, ne-homogenization. Ngokuya nge-throughput, sinemishini ehlukile yokuhlangabezana nokufakwa kokucaciswa okuhlukahlukene: kusuka ku-100ml kuya kumakhulu amathani wemigqa yokukhiqiza yezimboni ngeqoqwana ngalinye. SPECIF ...